Indlela ukukhetha processor kuya umbadlana kanye ihluzo ikhadi
Imfuneko wokusebenza ozinzile futhi okuqhubekayo kwe-computer siqu kuyimfuneko ngesikhathi inhlangano ngenkuthalo ukukhethwa zonke izingxenye. Lokhu ngeke kuphela ukwehlisa esiphansi inani ukwehluleka okungenzeka, kodwa futhi kuzovikela izingxenye kusuka ukwehluleka. Ngakho, noma ubani lokuqoqa uhlelo iyunithi kumele bavisise sendlela ukukhetha processor kuya umbadlana.
I-CPU - lena chip ezivamile, ihlanganiswe kakhulu zikagesi. Ukuze unike amandla lisebenzisa Mingaki imilente mncane nabo. Ngaphambili, bonke abathengisi ziyahambisana namazinga efanayo, owawuthi imilenze eziphawulwe ngenhla okunzima beniyingxenye chip (soldered omunye izigaba ukukhiqizwa). Lo mklamo ubizwa ngokuthi PGA. Processor imilenze ifakwe ekhethekile isixhumi isokhethi phezu umbadlana futhi kwaba fixed athutha. Nokho, kamuva, Intel samukele indlela ehlukile, lapho iqoqo izikhonkwane kahle embobeni, kanye processor esikhundleni imilenze ngesikhathi amaphuzu okuhambisanayo ibekwe pads. Lokhu kwenza ukuba kukhiqizwe eshibhile. Lolu hlelo ngokuthi LGA. Kuzo zombili lezi zimo, izixhumi enzelwe inombolo ethile izikhonkwane chip.
Ngakho, ukukhetha processor kuya umbadlana, kumelwe uthole ukuthi uhlobo kwezisekelo ekhona. Kukhona izindlela ezintathu yilezi: ngu ngqo luhlolo ibhodi futhi useshe igama isokhethi; usebenzisa imiyalelo ukuze umbadlana, lapho uhlobo; usebenzisa idatha kusuka umenzi. Ake sithi ibhodi yakhelwe processor isokhethi LGA 1156. Kulesi simo, kulingane imodeli Core le I3, i5, I7 kusuka kusuka Intel.
Microprocessor, ngokuba umkhiqizo electronic, emsebenzini ibusa amandla athile. Njengengxenye ibanga umkhiqizo ukwandisa kwandisa amandla ukusetshenziswa. Okungukuthi, yokufisa sengathi ukhethe processor kuya umbadlana, kubalulekile, waphinda, vula imiyalelo yakhe futhi uthole inkomba yokuthi yini imvamisa ovumelekile kungaba microprocessor. Ngokusobala, uma ukwesekwa wamemezela izixazululo 2 GHz, bese ufake i-chip imodeli isixhumi nge 3 GHz is hhayi Kunconywa, njengoba uhlelo ugesi ongahlabeki, ukuthatha naye kanye nezinye izingxenye. Ngokuvamile-ke kuchazwa "zonke izilimi".
Mhlawumbe impendulo yombuzo othi kanjani ukukhetha processor kuya umbadlana, ochwepheshe esaziwa kakhulu ezivela ezinkampanini ikhompyutha. Ngokuvamile zifeza block inhlangano ebhekene nazo zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ngakho, ukuze sithole processor kokuba bazijwayeze izici zayo, kubalulekile ukuhlola umbadlana. Kwakuba nezikhathi lapho ngokungagwegwesi imodeli isabelomali abathengi angathanda ukufaka chip enamandla. Nakuba nomkhiqizi umbadlana wabonisa usekelo processor ethile, ngomzamo ukufaka ezifanele Ukupholisa uhlelo ibhodi (hhayi eyisisekelo, kodwa ngempumelelo) lutho kuphelile ezinhle. Ngakho, ukushisa echibini elikhulu kungenzeka ukuvimba omakhelwane PCI-Express nezixhumi, inkimbinkimbi kakhulu ekugcinweni okwalandela nokunye. Ngakho, umuntu study kanjani ukukhetha processor kuya umbadlana, singakwazi ukuncoma pre-ukufanisa izilinganiso usayizi oyifunayo kohlelo ukupholisa nge umbadlana.
Zonke microprocessors zanamuhla iqukethe ukubunjwa yabo RAM isilawuli. Lokhu kuvumela nokwanda okuphawulekayo kwesilinganiso idatha, aqede inkinga ukuhambisana, lula ibhodi sakhiwo. Nokho, sisengakwazi ukuhlangabezana izinqumo zezizukulwane ezedlule, lapho ukuphathwa chip inkumbulo amamojuli kuyinto chip ahlukene ubekwe umbadlana. Isikhathi esining impela, lezi amabhodi ukuvumela ukufaka RAM emapheshana noma izinhlobo ezimbili (isib, DDR2 futhi DDR3), lokhu model ushintsho. Ukuhlaziya indlela ukukhetha processor kuya umbadlana, futhi lapho kufanele senze izinqumo ezinjalo kufanele inake ukuthi ibhodi ngesikhathi esifanayo ivumela ukusebenza elinento eyodwa uhlobo inkumbulo. Uma microprocessor yakhelwe ukusebenza nge DDR3, kubalulekile ukufaka kubo.
Kuyini ezithakazelisayo, khetha umbadlana ngokuba processor nje kubaluleke njengokugwema chip emaphakathi khetha okwesikhathi umbadlana ethile siqhubeka futhi show. Ngokukhetha izingxenye, kubalulekile ukuhlonipha isimiso silinganiso, lapho intengo isigaba bese ibhodi processor kufanele zibhekelele isibalo isibalo. Lokho, ngokufaka sekhompiyutha kahle endaweni umbadlana ezishibhile, umnikazi kuzolinganisela amakhono wesistimu. Ngokwesibonelo, iyunithi uhlelo ngesisekelo isabelomali ibhodi ASRock 960GM-VGS3 FX for ruble 2500. akufanele eqoqwe kusukela processor AMD kungcono FX-9370 ngoba izinkulungwane 15. deda., njengoba kulokhu, luzoqala kuphela imisebenzi eyisisekelo kanye amabhonasi ngesimo indlela yokuxhuma i-multiple ihluzo amakhadi, inguqulo ngokushesha we Sata, ivolumu kanye nokuvama inkumbulo nokunye. kuyoba ngaphandle ukwesekwa.
Njengoba isibonelo, cabangela indlela ukukhetha processor ukuba le umbadlana Asus CROSSHAIR FORMULA V-Z. Lesi yisisombululo top, okuyinto kubiza cishe izinkulungwane 14. Hlikihla. Lokhu umbadlana bangasebenza zonke izilimi kanye nezisekelo AM3 +. I Spec ngoba wabonisa ukuthi isekela imemori DDR3 -2400 MHz; Sata 6Gb / s; SLI / Crossfire imodi X. Ukuze uveze amandla aphelele esingokwemvelo, udinga processor operable nge inkumbulo 2133 MHz futhi senzelwe ukufakwa ngendlela Socket AM3 +. Njengoba ibhodi intengo engenhla ububanzi, microprocessor Kunconywa kusukela enkulungwaneni yesithathu isilondolozi nokuvama ukusebenza eliphezulu. Kulokhu, ukuhambisana isimiso phezulu, okungukuthi, inkokhelo uzosebenzisana lonke umugqa Ukuqedwa kwe-AMD imikhiqizo ube nezisekelo ezifanele (ngisho noma isilawuli isekela imemori 1333MHz). Ukuze ukhethe umbadlana ngokuba processor kungenziwa wakhulelwa lekusasa: ukuthola umbadlana ezinhle kanye CPU isabelomali, okuyinto kamuva sizobuyiselwange isixazululo egcwele.
Kubaluleke ngokufanayo ukuba baqonde indlela ukukhetha processor kuya umbadlana kanye ihluzo ikhadi. Ukuba isixazululo isiqophi leyehlukene, umnikazi ucela imali ngokuhlakanipha izimali e ukuthengwa microprocessor. ihluzo Modern izicelo, ikakhulukazi "ezisinda" kangaka (imidlalo), akuhileli nje amandla i-GPU, kodwa futhi central Silicon ingqondo. Ukuguquguquka ukusebenza eyodwa ingxenye kwenye kuzoholela yokuthi omunye wabo uyoba ingxenye isikhathi eyize, elinde ngokucubungula idatha kuphelile "umlingani" zalo.
Isixazululo efanele yale nkinga kunciphisa ekutadisheni imiphumela ukuhlola izilimi ezahlukene ihluzo ikhadi ekhona. Lezi idatha eziningi inethiwekhi. Ukutadisha amashadi, ungabona ukuthi ngamunye processor ngokushesha inani abahloli iyakhula. Ngesinye isikhathi esededelwe, ukukhula uba abangelutho. Processor, lapho kwenzeka, nje kangcono lokhu umbadlana kanye ihluzo ikhadi.
Indlela ukukhetha processor kuya umbadlana kukhompuyutha ephathekayo
Ngezinye izikhathi abanikazi amakhompyutha ephathekayo asethwe sokukhulisa umkhiqizo ne-computing system yabo. Lokhu inkinga isixazululekile ngokufaka esikhundleni processor. Kuyadingeka ukucacisa uhlobo isokhethi esekela ebhodini bese ukhetha esikhundleni. Ngaphezu kwalokho, amazwi akhe aphathelene imvamisa we izilimi ezintsha kumele ilingane. Libuye efiselekayo ukuthi TDP futhi uhambisane (noma ngaphansi). Okungukuthi, esikhundleni Pentium M 730 (1.6 GHz) zingabekwa Pentium M 780 (2.26 GHz).
Njengoba e "on Skype" sokuhlola imakrofoni: amathiphu namasu
Ikhompyutha Noise - Njengoba ukunqoba kwakhe?
Imodemu Yota: Isethaphu and Testing
Shabanov Aleksandr - umculi, okuyinto okunzima ukukhuluma
Lokho ukudla raccoon semvelo ekuthunjweni?
Kwenzekani uma imalimboleko ingakhokhwa nhlobo? Izimbangela, Ngemiphumela
Ama-Waffles aseDutch: I-Recipe Classic
Isiqedaphunga Ziyingozi - Ukubuyekeza izindlela ezingcono kakhulu
I-Fish-Cat: izici zobuningi nokuhambisana nabanye abantu